အတိတျမှာ ပိတျမိရငျး အခြိနျကုနျမခံနဲ့ … – Shinyoon
အတိတျမှာ ပိတျမိရငျး အခြိနျကုနျမခံနဲ့ …
အတိတျမှာ ပိတျမိနတေဲ့သူဟာ ဂူတဈလုံးထဲမှာ ပိတျမိနတေဲ့သူနဲ့တူတယျ … သသေလားဆိုတော့ မသသေေးဘူး ဒါပမေယျ့ရှငျသနျနရေခွငျး အကွောငျးအရငျးတှလေဲ သသေခြောခြာမရှိတတျဘူးလေ .. အရှကေို့ကွညျ့ပွနျတော့လဲ မှောငျနတေတျသလို အနောကျကိုကွညျ့ပွနျတော့လဲ မညျးနတေတျတယျ …
အတိတျတဲ့ … မြားသောအားဖွငျ့ ပြျောစရာကောငျးတာတှထေကျ နာကငျြစရာကောငျးတဲ့အတိတျကို ပိုပွီး သတိရနတေတျကွတဲ့သူ မြားတယျ… သူငါ့ကို ဘယျတုနျး ဘယျလိုခဈြခဲ့တာဆိုတဲ့ အတိတျကို မှတျမိပမေယျ့လဲ အခုလကျရှိငါ့ကို မခဈြတော့ပါလားဆိုတဲ့ ပစ်စုပ်ပနျကို လကျမခံတတျကွဘူးလေ …
တဈခုခုစပွောလိုကျရငျ … အရငျတုနျးကဆိုတဲ့ အကွောငျးအရာကပဲစတယျ … လကျရှိအခွအေနကေို လကျမခံကွဘူး … အရငျတုနျးက သူငါ့ကို ဘယျလိုပြျောစခေဲ့တာကို တဈခှနျးမကနျြပွနျပွောပွနိုငျတယျ ခုခြိနျ ဘယျလိုငိုစခေဲ့တာကိုတော့ မွိုသိပျထားတတျတယျလေ …
အဲ့ဒီအတိတျတှမှော ပိတျမိနရေငျးက ကိုယျ့ကိုယျကို အခြိနျတှမေဖွုနျးပါနဲ့ အခြိနျတှေ ဘယျလောကျကွာတဲ့အထိ ခဈြခဲ့ကွတယျဆိုတာ Relationship တဈခုရဲ့အဖွမေဟုတျဘူး ခု ကိုယျပြျောနလေား ကိုယျငိုနရေလားဆိုတာကိုပဲ ဖွပေါ …
တဈခါတဈလမှော အရငျလိုပွနျဖွဈလာမှာဆိုတဲ့အတှေးတှနေဲ့ အတိတျမှာ ပိတျမိရငျးက ကိုယျ့ကိုယျကို ပြောကျဆုံးမှနျးမသိပြောကျဆုံးလာတတျတယျ အတတျနိုငျဆုံးဆငျခွငျပါ ….
အတိတ်မှာ ပိတ်မိရင်း အချိန်ကုန်မခံနဲ့ …
အတိတ်မှာ ပိတ်မိနေတဲ့သူဟာ ဂူတစ်လုံးထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့သူနဲ့တူတယ် … သေသလားဆိုတော့ မသေသေးဘူး ဒါပေမယ့် ရှင်သန်နေရခြင်း အကြောင်းအရင်းတွေလဲ သေသေချာချာမရှိတတ်ဘူးလေ .. အရှေ့ကိုကြည့်ပြန်တော့လဲ မှောင်နေတတ်သလို အနောက်ကိုကြည့်ပြန်တော့လဲ မည်းနေတတ်တယ် …
အတိတ်တဲ့ … များသောအားဖြင့် ပျော်စရာကောင်းတာတွေထက် နာကျင်စရာကောင်းတဲ့အတိတ်ကို ပိုပြီး သတိရနေတတ်ကြတဲ့သူ များတယ်… သူငါ့ကို ဘယ်တုန်း ဘယ်လိုချစ်ခဲ့တာဆိုတဲ့ အတိတ်ကို မှတ်မိပေမယ့်လဲ အခုလက်ရှိငါ့ကို မချစ်တော့ပါလားဆိုတဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကို လက်မခံတတ်ကြဘူးလေ …
တစ်ခုခုစပြောလိုက်ရင် … အရင်တုန်းကဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာကပဲစတယ် … လက်ရှိအခြေအနေကို လက်မခံကြဘူး … အရင်တုန်းက သူငါ့ကို ဘယ်လိုပျော်စေခဲ့တာကို တစ်ခွန်းမကျန်ပြန်ပြောပြနိုင်တယ် ခုချိန် ဘယ်လိုငိုစေခဲ့တာကိုတော့ မြိုသိပ်ထားတတ်တယ်လေ …
အဲ့ဒီအတိတ်တွေမှာ ပိတ်မိနေရင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အချိန်တွေမဖြုန်းပါနဲ့ အချိန်တွေ ဘယ်လောက်ကြာတဲ့အထိ ချစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ Relationship တစ်ခုရဲ့အဖြေမဟုတ်ဘူး ခု ကိုယ်ပျော်နေလား ကိုယ်ငိုနေရလားဆိုတာကိုပဲ ဖြေပါ …
တစ်ခါတစ်လေမှာ အရင်လိုပြန်ဖြစ်လာမှာဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ အတိတ်မှာ ပိတ်မိရင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျောက်ဆုံးမှန်းမသိပျောက်ဆုံးလာတတ်တယ် အတတ်နိုင်ဆုံးဆင်ခြင်ပါ ….
သူ နငျ့ကို သိပျခဈြတာပဲ တဲ့ … ခဏလောကျရီပါရစေ
ငါမရှိတော့ရငျ အရာရာအဆငျပွသှေားမယျလို့ တှေးနမေိတာလား …